यस्तो हुनुपर्छ प्रदेशका सांसद महिलाको भूमिका |
यस्तो हुनुपर्छ प्रदेशका सांसद महिलाको भूमिका
प्रकाशित मिति :2018-02-09 13:51:30
देशका सातवटै प्रदेशसभाको पहिलो बैठक भएको एक साता बितिसकेको छ । अब लगातार प्रदेशसभाले आफ्नो विजनेश सुरु गर्नुपर्छ । प्रदेशमा निर्वाचित सांसदहरूले सभामुख, उपसभामुखको चयन, प्रदेश कार्यपालिका गठन, प्रदेश कानूनको निर्माणका काम लगातार गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
देशभर निर्वाचित कूल ५ सय ५० जना प्रदेश सांसदमध्ये ३४ प्रतिशत अर्थात् १ सय ८९ जना महिला निर्वाचित छन् । यी महिलामध्ये १७ जनामात्रै प्रत्येक्ष निर्वाचित हुन् । बाँकी १ सय ७२ जना संविधानको बाध्यात्मक प्रावधानको कारण दलहरूले समानुपातिकमा चयन गरेका हुन् ।
प्रदेश संसदमा आरक्षणको व्यवस्था संविधानले नै गरेको भए पनि सरकारमा आरक्षण सुनिश्चित छैन । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ ले प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्य मध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको बीस प्रतिशत भन्दा बढि नहुने गरि प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, यसमा महिला कति हुने ? वा समावेशी सिद्धान्तलाई सम्बोधन गर्न संख्या तोकेर नै आरक्षणको व्यवस्था छैन । प्रदेशको सरकारले कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्दछ । प्रदेशको पहिलो बैठक भएको एक महिना भित्र प्रदेश सरकार गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । बजेट बाँडफाँड, कार्यान्वयन तथा कार्यक्रमको सञ्चालन गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारको नै हुन्छ । लाभको वितरण स्थानीय तहसम्म कसरी पु¥याउने भन्ने कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पाएको सरकारमा महिलाको सहभागिता कसरी सुनिश्चित गर्ने ? अब सांसद महिलाले भूमिका देखाउने ठाउँ यहि हो ।
यसअघि केन्द्रीय संसदमा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत भए पनि दलहरूले सरकारमा महिला लैजान उदारता नदेखाएको अभ्यास हाम्रो सामु छर्लङ्ग छ । अब महिला स्वयम् सचेत हुनुपर्छ । महिलाले आफू मध्येबाट पनि सक्षम महिलालाई कार्यपालिकामा पठाउन प्रदेशका महिला सांसद एक हुन जरुरी छ ।
अहिले प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने महिलाको बाटो पनि बन्द भएको छ । प्रदेश नम्बर ३ मा मात्रै मुख्यमन्त्रीमा अष्टलक्ष्मी शाक्यले चाहना राखे पनि प्रदेश संसदीय दलको नेतामा उनलाई हराइएपछि मुख्यमन्त्री बन्न बाटो पनि बन्द भयो । अन्य प्रदेशमा एउटा पनि महिला मुख्यमन्त्रीको दौडमा छैनन् ।
बजेट बाँडफाँड, कार्यान्वयन तथा कार्यक्रमको सञ्चालन गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारको नै हुन्छ । लाभको वितरण स्थानीय तहसम्म कसरी पु¥याउने भन्ने कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पाएको सरकारमा महिलाको सहभागिता कसरी सुनिश्चित गर्ने ? अब सांसद महिलाले भूमिका देखाउने ठाउँ यहि हो ।
महिलाले आफ्नो दाबेदारी दिएर मात्रै पनि नहुने रहेछ । नेतृत्वलाई आवाज सुनाउने गरि दाबेदारी दिनुपर्छ । अब मन्त्रीमण्डलमा महिला ल्याउन समेत पहल गर्नुपर्ने जिम्मेवारी निर्वाचित महिलाहरूको काँधमा आएको संघीय मामलाका जानकार बालानन्द पौडेल बताउँछन् । संघीय संविधानको कार्यान्वयनको यो सुखद चरणमा महिलाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आफ्नो मुद्दा आफै बोक्न पाउने ऐतिहासिक अवसर आएको उनको विश्लेषण छ । यो अवसरको सांसद महिलाहरूले मजासँग उपयोग गर्नुपर्ने उनी बताउछन् ।
अर्कोतर्फ संघीय कानूनले स्थानीय सरकार र आफ्नो कार्य सञ्चालनको कानून बनाउनुपर्ने अवस्था पनि छ । प्रदेशसभाले बनाउने कानून आफू मातहतका स्थानीय निकायका लागि मार्गदर्शक हुन्छ । संविधानको अनूसुची ६, ७ र ९ ले प्रदान गरेका जिम्मेवारी पूरा गर्नको लागि प्रदेशसभाले कानून, नीति तथा नियमहरू बनाउनु जरुरी हुन्छ । त्यसमा पनि लैंगिक हिसाबले समावेशी कसरी बनाउने ? महिलाहरूले गम्भीर भएर विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।
विभिन्न सातवटा प्रदेशका फरक–फरक भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विविधता छन् । ति विविधता अनुसार महिलाका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक अवस्था फरक–फरक छन् । ति समस्या सम्बोधन हुनेगरि कानून निर्माण गर्न महिलाहरू संवेदनशिल हुन जरुरी छ । स्थानीय आवश्यकता, त्यहाँका महिलाका समस्या तथा उनीहरूका उत्थानका कार्यक्रमका लागि आफ्नो भूमिका देखाउनुपर्ने जिम्मेवारी महिलाकै काँधमा छ ।
नेकपा एमालेबाट प्रदेश नम्बर ३ की सांसद रचना खड्का यतिबेला आफूहरूलाई प्रमाणित गर्ने सुनौलो अवसर आएको बताउँछिन् । ‘हामी नयाँ अभ्यासमा छौं । २२ वटाभन्दा बढि कानून हामीले निर्माण गर्नुपर्ने छ’ आफ्नो जिम्मेवारी सुनाउँदै खड्का भन्छिन्, ‘स्थानीय न्यायालयलाई कस्तो बनाउने, महिलाका स्थानीय आवश्यकतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ ।’
नेपालमा पटक–पटक राजनीतिक क्रान्ति त भएको छ । अब सामाजिक आर्थिक क्रान्ति गर्ने सुनौलो समय यही हो । यसको लागि राजनीतिक सचेतना मार्फत समाजमा विपन्न, मूलधारबाट बाहिर रहेका, हिंसाको चपेटामा परेमा महिलाको उत्थान पहिलो प्राथमिकता हो । आफ्नै घर आँगनमा सिंहदरबारको अधिकार पुगेको व्यवहारिक महसुस गर्न पाउनुपर्ने बेला यो भन्दा उपयूक्त अरु हुन सक्दैन ।
हुन त फरक–फरक वैचारिक धरातलबाट महिलाहरू निर्वाचित भए पनि उनीहरू आफ्ना दलप्रति मात्रै बफादार भएर पुग्दैन । उनीहरूले देशको आधा भन्दा धेरै संख्यामा रहेका महिलाको आवाज बोक्नुपर्छ । अहिले प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू सबैले कुनै न कुनै किसिमको महिलामाथि हुने विभेद पक्कै भोगेका छन् । भौगोलिक तथा वर्गीय रुपमा महिलाले भोग्ने विभेदको तह र प्रकृति फरक होला । तर सामाजिक रुपमा समान खालको विभेद छ भन्ने चेत उनीहरूलाई पक्कै छ ।
संघीय शासनको कार्यान्वयनको सुरुआती चरणमा महिलाहरूले निर्वाह गरेका भूमिका भविष्यको लागि नजिर सरह हुन्छ । यतिबेला आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई न्याय गर्न सके भने मात्रै आगामी दिनमा महिलाको स्तर अवश्य माथि उठ्ने छ । यो विषयमा सांसद महिलाहरू गम्भीर बनुन् ।